Gudaha Aqalka Cad kaddib guuldarradii Trump | Xaysimo
Home War Gudaha Aqalka Cad kaddib guuldarradii Trump
Joogitaankii Aqalka Cad ee Trump oo ku sii siqaya maalmihiisii ugu danbeeyey, xasillooni darro ayaa hadhaysay dhismahaasi iyadoo la isku dayayo in laga doodo habkii natiijada doorashada iyo qaabkii loo wejahi lahaa maxkamadaha.
Brian Morgenstern, oo ah ku xigeenka agaasimaha isgaadhsiinta ayaa xidhnaa jaakad ay ku xardhan tahay astaanta Aqalka Cad xafiiskiisa oo ku yaal dhanka West Wing. Jaakadda ayaa uu kor isaga siibayay, sida oo uu sii baxayana waa u muuqday. Qolkan, oo xoogaa dhawr albaab ah ka durugsan Xafiiska Oval, wuu madoobaa, oo hooska qofka ayaa sawirmayey. Waxaana sawirkaasi mid caddaynaya sida xaal yahay
Maamulihiisa, waa madaxweyne Trump e, wuxuu ku sugnaa qeyb kale oo ka tirsan Aqalka Cad. Daqiiqadaas, Donald Trump wuxuu khadka taleefanka kula hadlayey Rudy Giuliani, oo ah madaxa dedaalladiisa sharci ee ka dhanka ah doorashada, iyo koox xildhibaano gobolka ah oo isugu yimid “dhageysiga”, sida ay hadalka u dhigeen, hoteel ku yaal Gettysburg , Pennsylvania.
Madaxweynaha ayaa qadka taleefanka ka lahaa “doorashadan wax isdaba marin ayaa dhacday oo ma ogolaan karno inay taasi dhacdo.”
Dadaalkii Trump ee ahaa ka dhanka ahaa natiijooyinka doorashada ee Pennsylvania ayaa guuldarreystay Jimcihii, waqti aan dheereyn ka dib waxan ay ugu yeedhaan dhageysiga, xitaa taas asaaskooda sharci ma uu fadhiyin. Qaadiga maxkamada racfaanka ayaa sheegay in “aysan jirin wax aasaas ah” oo uu ku dhisan yahay ka hortagiddiisa ka dhanka ah natiijada doorashada. Shahaadada codbixinta ayaa muujisay Madaxweynaha la doortay Joe Biden inuu ku guuleystay gobolka in ka badan 80,000 oo cod.
Codbixinta Arizona waxaa la xaqiijiyey Isniintii iyo Wisconsin oo iyana la filayo dhowaan – labada gobolba Biden ayaa ku guuleystay. Saraakiisha dowladda waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan xaaladdii kalaguurka ee maamulka cusub, madaxweynaha cusubna wuxuu bilaaban doonaa muddo xileedkiisa 20-ka Janaayo
Trump wuxuu sii wadaa sheegashadiisa guusha. Hase yeeshe dhabarka dambe ee Aqalka Cad, dadku waxay toos u arkaan sida xaal yahay. Waxay ogyihiin maalmahoodii ay ku sugnaayeen Wing West inay yihiin kuwo kooban. Waxay sidoo kale ogyihiin in marka ay guuldareystaan madaxdoodu, ay fiicantahay in laga fogaado.
Morgenstern wuxuu yidhi waa ganacsi sidii caadiga ahayd: ” kor ayaan u kacnay. Weli waxaan u shaqeynaynaa si adag.” Si kastaba ha noqotee wuxuu ahaa midka kaliya ee ku jira xafiisyada West Wing.
Badanaa xafiisyadaas waxaa ka buuxa dad – kalkaaliyeyaal shaqeeya saacadaha oo dhan. Laakiin hadda ma ahan sidii hore.
Jack O’Donnell, oo mar maamuleyay goob khamaar ku taal Atlantic City, New Jersey, Trump, wuxuu sheegay inuu fahamsan yahay sababta dadka u shaqeeya madaxweynaha ay uga yaaci doonaan waqtiga sidan oo kale ah.
“Waxaad ku socotaa qolofka ukunta. Qofna ma doonayo inuu sheego wax qaldan.”
Madaxweynaha xanaaqiisa, iyo hamigiisa iyo hamigiisa, ayaa weli ahaa kuwa taagan oo waaraya. Wuxuu ku guuleystey qayb ahaan dadka iyo diidmada guuldarada, oo qaybta kale ahayd. Waxa kale oo uu lahaa qaab hoggaamineed o u gaar ah intii danbe se galay ka badbadin.
Wuxuu ka soo muuqday qolka warbixinta ee West Wing usbuucii la soo dhaafay si uu ugu faano suuqa saamiyada. Dow Jones wuxuu xiray wax ka badan 30,000, heer rikoor ah. Madaxweynaha, ayaa sidoo kale yidhi Morgenstern, “wuxuu u dabaaldegayay guusha suuqa oo runtii qeyb ahaan sabab u ahayd siyaasadiisa”, sida “hagaajinta heshiisyada ganacsiga” iyo “madax-bannaanida tamarta”.
Si uga hortago guuldarrooyinka, Trump waa dafiray xaqiiqda, ayaa ay yidhaahdaan kuwa isaga yaqaan.
“Maskaxdiisa, ma lumin doono,” ayuu yidhi O’Donnell, oo sharraxayay doorashada. “Waligiis ma qiri doono. Had iyo jeer waxay noqon doontaa: ‘Aniga ayaa layga qaaday oo badiyey.’ halkudhiggiisu
Trump ayaa hadda u dagaallamaya sidii xisbiga Jamhuurigu u maamuli lahaa aqalka Senate-ka wuxuuna qorsheynayaa inuu tago Georgia maalinta Sabtida si uu u taageero musharrixiinta doorashada ku celiska ah
Dhanka kale, bannaanka xafiiska Morgenstern, mid ka mid ah miisaska madhan ayaa lagu qurxiyay weedh ah: “Guul darradu maahan ikhtiyaar.”
Hal ku dhiggu wuxuu soo koobayaa falsafada Trump iyo sida uu ula dhaqmayo madaxtinnimada – ugu yaraan ilaa uu ka tago.